Amata Inks $1 Bn Smart & Eco City Deal with Construction Ministry | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceAmata Inks $1 Bn Smart & Eco City Deal with Construction Ministry
Amata Inks $1 Bn Smart & Eco City Deal with Construction Ministry
AMATA Asia (Myanmar),asubsidiary of Amata Corporation,alisted company on the Stock Exchange of Thailand, signed an agreement with the Ministry of Construction on January 24 for the $1 billion Yangon Amata Smart and Eco City project.
The project, 80 percent owned by Amata with the Department of Urban and Housing Development holding the remaining interest, is slated to be implemented over five years on 2,000 acres of land near Laydaung Kan village in East Dagon Myothit and South Dagon Myothit.
The project is expected to create over 33,000 jobs for local people.
Construction ofapower station andawater treatment facility is taking place this quarter. The first factory will be built in the third quarter with operation start date in 2021.
“[The project] will support the country’s sustainable development plans by encouraging economic stability, reducing poverty and improving human resources and socio-economic development,” said Yasuo Tsutsui, managing director of Yangon Amata Smart and Eco City Ltd.
Project execution will focus on sustainable development, better environmental management and resource management, according to the company.
Yangon Amata signeda50-year land lease agreement with the government with two possible 10-year extensions, terms allowed under the Myanmar Investment Act.
Other agreements the company signed with the Ministry of Construction cover industrial-use gas distribution; transportation and communications; electricity and natural gas production and distribution; construction materials manufacturing and distribution; and building of international vocational schools.
Smart and Eco City စီမံကိန်း လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း ပြီးစီးမည်
ထိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် AMATA Corporation PLC ၏ လက်အောက်ရှိ AMATA Asia (Myanmar) Limited က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြအိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ရက်တွင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
စီမံကိန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)နှင့် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)ရှိ လေးထောင့်ကန်ကျေးရွာ အနီးရှိ မြေဧက ၂၀၀၀ ပေါ်တွင်ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀ ရာခိုင်နှှုန်း နှင့် AMATA Asia (Myanmar) Limited မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်မည်ဖြစ်ကာ စီမံကိန်းသည် ငါးနှစ်အတွင်းအပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၃၃၀၀၀ ကျော်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီသည် ယခုနှစ်၏ ပထမသုံးလပတ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် ရေသန့်စင်စက်ရုံများ စတင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။ စီမံကိန်းအတွင်းရှိ ပထမဆုံးစက်ရုံသည် ယခုနှစ် တတိယသုံးလတွင် တည်ဆောက်သွား မည်ဖြစ်ကာ လာမည့်နှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကျိုးပြုမှုအတွက် ပထမဦးဆုံးသော ခြေလှမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်များဖြစ်သည့် စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို လျော့ချခြင်း၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်နဲ့ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ ” ဟု Yangon AMATA Smart and Eco City Limited (YASEC) ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Mr. Yasuo Tsutsui က ပြောသည်။
YASEC ကို ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစရှိသည့် အချက်များအပေါ် အခြေခံကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ နှစ် ၅၀နှင့် နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်စီ နှစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့် မြေငှားစာချုပ်ကိုလည်း ချုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် စီမံကိန်းအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုမည့် လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ရန် စက်မှုဆိုင်ရာ ဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းများ၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် သဘာ၀ ဓာတ်ငွေ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု သင်တန်းကျောင်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
AMATA မှ စီမံကိန်း အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့သို့တင်ပြခဲ့ပြီး နားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လေ့လာမှုများကို ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလမှ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် EIS, SIA လေ့လာဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Previous articleNTT Invests $400 Million in MIST Cable Project
Next articleSingapore Says China Virus Outbreak Will Hit Its Economy